Zviratidziro - Sichuan Yibin Tea Indasitiri Yekunze & Export Co, Ltd.
Mushure memakore mazhinji ekuunganidza, iro bhizinesi rakatora chikamu pakuratidzira kwepamba uye kwekunze kanopfuura ka100, iko kuratidzira hupfumi hunhu hwevapfuuri kuyerera, kuyerera kweruzivo, kuyerera kwemari, nezvimwewo zvakanakira kusangana kwakanyanya, kwete chete zvinokwanisa kusimudzira zvigadzirwa zvebhizinesi. , kuwedzera ruzivo uye kuwedzera chiteshi, kukurudzira kutengesa, kuparadzira maraki, zvakare kunogona kupa mabhizinesi nehunyanzvi hwekuvandudza uye mikana yebasa, saka, Makambani anofanirwa kuita basa rakasimba pakuratidzira kushambadzira, kuitira kuti kupona nekusimudzira kwemabhizinesi pakuratidzira hupfumi pa iyi chikuva kuti uwane budiriro.
1. Ziva zvakawanda zvingangoita vatengi
Imwe ndeyekuwana zvakanakira zviwanikwa. Kugonesa iwo anotora chikamu mabhizinesi kuwana mikana yekuenzanisira yakavhurika muzvigadzirwa, tekinoroji, kugadzirwa, kushambadzira uye zvimwe zvinhu, kudzikisa mukana wemubhadharo wezvemumba zviwanikwa, uye kusimudzira kukwikwidza kwakazara kwenzvimbo dzinoitirwa uye mabhizinesi anotora chikamu. 80% ndevatsva vangangoita vatengi, uye iyo yakanaka inounzawo epamusoro-nhanho vatengi nyowani kune varatidziri. Kune zvigadzirwa nemasevhisi emakambani ari kutora chikamu, ivo vanokwanisa kuwana mhedzisiro uye kukohwa.
2. dzidza kubva kune vezera
Iyo yekuratidzira saiti inopa iwo mukana wekudzidza yemakwikwi mamiriro, mhedzisiro yemukana uyu hauna muganho. Pano, iko kushandiswa kwevakwikwidzi kupa zvigadzirwa, mitengo uye nzira dzekushambadzira uye zvimwe zvinhu zveruzivo, zvinokubatsira iwe kuronga kwenguva pfupi uye -refu-kwenguva kuronga. Mabhizinesi ekutora chikamu pakuratidzira kwekuwedzera misika mitsva ndiyo nzira yekuwana zvakapetwa kaviri nehafu yekuedza, asi zvakare nenzira inonyanya kushanda
3. Tamp chikuva chechiratidzo
Exhibition hupfumi ine hombe indasitiri-inotyairwa mabhenefiti. Kune emabhizinesi anotora chikamu mukushambadzira kwekuratidzira, zvigadzirwa zvavo hazvingogone kuratidzwa zvizere muchiratidziro, kuwedzera kuwedzera ziviso yezita nemukurumbira, asiwo kuburikidza nekushambadzira kwekuratidzira, kunogona kuunza mirairo kumabhizinesi uye kuchinjana mabhenefiti akapfuma ehupfumi kwavari.